लकडाउनमा अलपत्र पर्यटकसँग भिसा शुल्क : आलोचनापछि फिर्ता लिने तयारी – POKHARA TOURISM NEWS
HomeNepalलकडाउनमा अलपत्र पर्यटकसँग भिसा शुल्क : आलोचनापछि फिर्ता लिने तयारी
असार ३ पोखरा: हचुवाको भरमा निर्णय, विरोध पछी फिर्ता ! कस्तो अपरिपक्व नेपालको चलन ?
नेपालमा फसेका विदेशी नागरीकको भिसा शुल्क
‘विदेशमा समस्यामा परेका तपाईंका नागरिकलाई हामीले आम माफीसम्म दिएर संरक्षण गरिराखेका छौं, तपाईंहरूले नेपालमा फसेका हाम्रा नागरिकलाई किन भिसा शुल्क लगाइरहनु भएको छ ? अध्यागमन विभाग र पर्यटन बोर्डका अधिकारीहरूले सोमबार र मंगलबार नेपालस्थित विदेशी दूतावासबाट बारम्बर यस्ता प्रश्नको समाना गर्नुपर्यो।
तर लकडाउन लम्बिएपछि गृहले नेपालमा थुनिएका पर्यटकबाट पैसा उठाउने एक जुक्तिस्वरुप विलम्ब शुल्क र जरिवाना नलिने तर, भिसा शुल्क लिने निर्णय गर्यो ।
नकारात्मक सन्देश गयो ! पर्यटन बोर्ड
सो निर्णयले आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै पर्यटकले सम्बन्धित दूतावास, पर्यटन बोर्ड र अन्य निकायमा गुनासो गरे । नेपालमा तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि थुनिएका पर्यटकसँग दुई दिनसम्म अध्यागमनबाट पैसा उठाउन लागिएपछि पर्यटन बोर्डमा धेरै गुनासा आएका छन् ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा। धनञ्यय रेग्मीका अनुसार लकडाउनपछि आफ्नो मुलुकले उद्धार नगरेका, नेपाल नै सुरक्षित छ भनी यतै रोकिएका, चार्टर्ड उडानको टिकट काट्न नपाएका विदेशीहरू नेपालमा छन् । यसको यकिन तथ्यांक नभए पनि १२ देखि १५ सय हाराहारी विदेशी पर्यटक नेपालमै रोकिएको उनले जानकारी दिए ।
बेखर्ची भएर रोकिएका पर्यटकसँग सरकारले नै पैसा उठाउन थालेपछि नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको सीईओ रेग्मीले बताए ।
‘हामीले पर्यटकको भावनालाई बुझेर रकम नउठाउन आग्रह गरेका हौं, उनले भने, ‘संकटका बेला जरिवाना लगाउने होइन, अहिले खुसी बनाएर राख्ने हो, सबै ठिकठाक भएपछि त पर्यटक आफैँले खर्च गरिहाल्छन् नि ।
अब लिन्नौं ! अध्यागमन
व्यापक गुनासो र आलोचनापछि भने गृहमन्त्रालय आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने तयारी गरेको छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले आजै मन्त्रालयले ‘साविक कै निर्णयअनुसार गर्ने’ निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।
‘आज मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट साविकमा भएकै निर्णयअनुसार गर्ने भन्ने आएको छ,’ उनले भने, ‘भोलिबाट हामी कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिई पर्यटकको भिसा नवीकरण गर्छौं ।
मानवीयताका हिसाबबाट पनि थुनिएका पर्यटकसँग जरिवाना लिनु उचित नहुने भएकाले मन्त्रालय साविककै निर्णयमा फर्किने उनको भनाइ छ। अब बढीमा सात दिनसम्म विभागले विनाकुनै शुल्क भिसा नवीकरण गर्ने भएको छ ।
तर लकडाउन सुरु भएको ११ चैतभन्दा अगाडि नै भिसा अवधि सकिएका तर आफ्नै लापरवाहीले नवीकरण नगरेका विदेशी नागरिकको हकमा भने नियमअनुसार नै हुने महानिर्देशक केसीले जानकारी दिए ।
यो ट्राभल भिसामा आएकाको हकमात्रै होइन अन्य प्रयोजनका आएका व्यक्तिको हकमा समेत नियमानुसार हुनेछ । by onlinekhabar